Kumbiyuutarka uumiga, Tayeynta Qaboojinta, Daaweynta Biyaha - Yubing
Qaboojiyeyaasheena ayaa si ballaaran looga codsaday meelo kala duwan si ay ula midoobaan qalabyada la qaboojiyey.
Qiimaha dayactirka iyo tamarta oo hooseeya waa natiijo ka timid qaab dhismeed aan dhib lahayn.
Had iyo jeer ku xisaabtam qiimaha ugu wax ku oolnimada badan meertada nolosha oo dhan.
Raac maareynta mashruuca lagu kalsoonaan karo oo si dhakhso leh uga jawaab celinta adeegga iibka kadib.
Soosaaraha Xirfadlaha ah ee Nidaamka Tayada Qaboojinta
Waxtarka uumi-baxa sarreeya ee uumiga keena Indus ...
ICE Nidaamka Osmosis-ka Dib-u-Celinta ee loogu talagalay Cooli ...
ICE Nidaamka Sifeynta Sare ee Feejignaanta Sare ee ...
Karti Sare & Keydinta Tamarta
Yaree nidaamka tamarta, isticmaalka biyaha, dayactirka iyo kharashka rakibida oo leh awood qaboojiye sare.
Kordhi qiimaha ku-oolnimada inta lagu jiro wareegga nolosha oo dhan.
Ku xir oo ku dhaji natiijooyinka qaabeynta qaab fudud, rakibidda dhaqaale.
Waari kara oo lagu kalsoonaan karo
Aan-daalin, nolol dheer iyo miisaan fudud.
Taawarrada qaboojinta ayaa sida caadiga ah la dhigaa gudaha warshadaha iyada oo ah mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah oo ay weheliyaan mashiinno kale oo badan oo culus oo ka tirsan unug warshadeed oo had iyo jeer ku hawlan soo saarista, farsamaynta ama isu-ururinta alaabooyinka. Nidaamyada kala duwan ee warshadaha ayaa ka dhigaya biyaha kulul kuwa lagu shubo munaaradaha qaboojinta. Minaaradaha qaboojinta ee nozzles waxay ku buufiyaan biyaha kulul “media fill” halkaasoo ay ku yaalliin aagga ugu badan taasna waxay u horseedaa xiriir biyo-hawo ah si loo qaboojiyo biyaha. Taawarrada qaboojinta waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa sifeynta saliidda, dhirta kiimikada, dhirta tamarta kuleylka, dhirta nukliyeerka, dhirta wax soo saarka cuntada, dhirta gaaska dabiiciga ah iwm.
Waan ku farxi lahayn inaan helno su'aalahaaga oo aan siino taageero deg deg ah.
Nofeembar 05, 2020
Nofeembar 01, 2020
Warshadaha aan u adeegno